Breaking News: New York oo laga qaxayo taariikhda markii ugu horeysay – SBC
Breaking News: New York oo laga qaxayo taariikhda markii ugu horeysay
Posted by editor on Agoosto 27, 2011 Comments
Magaalada New York ee cariga Mareykanka ayaa taariikhda markii ugu horeysay waxaa dadka lagu wargaliyey inay ka qaxaan qaybo ka mid ah magaalada iyadoo waqtiga geeska Afrika marka uu gaaro 7-da fiidnimo dadka loo qabtey.
Kumanaan kun oo qof oo ku dhaqan dhulka hooseeya shan degmo oo ka mid ah New Yorka aya lagu wargaliyey inay ka baxaan iyadoo ay ku soo dhawdahay magaalada duufaanta Irene oo hada ku dhex rafanaysa gobolada bari ee xeebaha wadanka Mareykanka.
Duqa magaalada New York Michael Bloomberg ayaa dadka u sheegay in kooxaha gargaarka deg deg ah aanay awood u heli doonin inay caawiyaan dadka ku dhaqan deeganadaasi hadii aanay ka bixin goobahaasi.
Duufaanta, dabeylaha & roobabaka is wata ayaa waxay jiraan 110 mph iyadoo la sheegay in daadku ay kor u kici doonaan ilaa iyo 7 cagood (feet).
1 milyan oo qof ayaa la filayaa inay koronto la’aan noqdaan, waxaa kale oo la xiray sadex dhuun oo gala faras magaalaha gaar ahaan Manhattan iyadoo sidoo kale la sheegay in garoomada diyaaradaha oo uu ku jiro JFK airport albaabada la isagu soo laabo.
Madaxweyne Obama oo fasax ku jiray ayaa soo gaabiyey tamashlihii uu ku jiray waxaana dib uu ugu soo laabtey magaalada Washington si uu uga qayb qaato hawlaha lagu xakemaynayo duufaantan.
Warar dheeraad ah, sawiro, muuqaalo & wararkii ugu dambeeyey kala soco SBC